China iindawo enginge Ihowuliseyili spin kwi oyile lokucoca ulwelo 26300-02503 mveliso Itraki Hyundai kunye nabenzi | Chuangqi
Ihowuliseyili iinxalenye enginge spin kwi oyile lokucoca ulwelo 26300-02503 for Itraki imoto
Ityala elinzima lomsebenzi wentsimbi liyachasa ukugqwetha
I-o-ring ebunjiweyo yangaphambi kokuthambisa inika ukutywina okungaphezulu kokucoca ulwelo
Uyilo olwahlukileyo lweTorque Stopper luthintela ukuvuza okuvela ngaphantsi kwetyhutyana
Chwetheza Icebo lokucoca ulwelo oyile
Ubungakanani bomtya Ubungakanani obuqhelekileyo
Ukucocwa kokusebenza kakuhle 99.7%
Umbala Ngokutsho imfuneko loMthengi
Izixhobo Isinyithi, i-100% yePhepha lokuCoca iPhepha
Isiqinisekiso I-ISO / TS16949
Indawo yokuQala I-China Mainland
Inkonzo I-OEM kunye ne-ODM
Hlala kwioyile enobushushu obuphezulu 135 ° C iiyure ezingama-198
Amandla okubonelela I-10000pcs / iVeki
KWIPOT Guangzhou / Ningbo / Shanghai / Qingdao
Ixesha lokuhlawula TT, Westen Union, Moneygram, L / C, D / A, D / P / Alipay
Ixesha lokuzisa Ukuthunyelwa ngeentsuku ezingama-30 emva kwentlawulo
Ukupakisha Uhlobo lwe-RAINBOW / olungakhethi cala / elenziweyo / ibhokisi yombala
1 ibhegi yeplastiki + ibhokisi + ibhokisi;
2.Ibhokisi / ingxowa yeplastiki + ibhokisi
Injineli yokuhambisa ukuya kuthi ga kwi-5,000 yeemayile zokukhusela injini
I-96% ye-Multi-Pass yokusebenza kunye nokususwa kwamasuntswana amancinci njenge-20 microns
Anti-idreyini yangasemva enegunya lokugcina eliphezulu ukunceda ukukhusela i-injini ngexesha lokuqalisa
Gasket zilahlwe ibonelela itywina engqinelanayo ukunqanda ukuvuza
Soloko ujonga ulungiso usebenzisa isihluzi seZithuthi
Kukho umahluko omkhulu phakathi kwesihluzo se-generic, esathengiswayo kunye neefilitha ezikumgangatho ophezulu ezakhelwe kwimigangatho engqongqo yezixhobo. Icebo lokucoca ulwelo oluqhelekileyo linomsebenzi opeyintwe kakuhle kunye nokupakishwa okunomtsalane, kodwa isenokungafikeleli kwiimfuno zewaranti yomenzi. Izihluzi zeoyile yeConqi yokuqala yeFit® zibonisa imeko yentsimbi enzima ukumelana nokugqwetha, imithombo yeendaba ezimbini zokucoca ukhuseleko kwinjini enkulu, i-o-ring ebunjiweyo, engaphambi kokuthambisa ukukhusela ukuvuza, kunye nevalve yokuthintela ukungcola eyokukhusela injini ngokuchasene nokonakalisa ukunxiba xa kuqala ukubanda. Njengebhonasi eyongeziweyo, iifilitha zeConqi zikwasebenzisa uyilo lwamatyala eTorque Stopper oluthintela ukuqiniswa okungaphezulu kunye nokwenza lula ukufakwa, eyona nto iphambili kubo bazenzele yona. Iifilitha zeoyile yohlobo oluthile azizukuthengiselana. Izihluzi zeoyile yeConqi yokuqala yeXesha elikhuselekileyo zikhusela utyalo-mali lwakho oluxabisekileyo.
Xa kuziwa kwiifilitha zeoyile, awungekhe wenze ngcono kuneConqi. Kungenxa yoko le nto siyenye yenkulumbuso yababoneleli ngeefilitha zeoyile. Sisebenzisa olu lwazi lwehlabathi ukuvelisa umgca wokuqala weFit. Ngenxa yokuba isihluzo seoyile ngasinye sibekwa kwinkqubo yokuvelisa kunye yovavanyo engqongqo yeConqi, unokuqiniseka ukuba iyahlangabezana nemigangatho yethu elungileyo yokusebenza kunye nokusebenza.
■ Icebo lokucoca ioyile lineemfuno eziphezulu zephepha lokucoca ulwelo kunefilitha yomoya, ikakhulu kuba iqondo lobushushu beoyile liyahluka ukusuka kwi-0 ukuya kwi-300 degrees.
Under Phantsi kotshintsho lweqondo lobushushu elibukhali, uxinzelelo lweoyile luyatshintsha ngokufanelekileyo, oluya kuchaphazela
Iringi yokutywina yerabha
■ ring ring lokucoca ulwelo kwizinga eliphezulu zenziwe ngerabha ekhethekileyo ukuqinisekisa ukuvuza kwe-100%
■ Iimveliso zethu zisebenzisa iphepha lokucoca ulwelo ekumgangatho ophezulu, nokuba kungaphantsi kweenguqulelo ezinobushushu, kodwa zinokucoca ngokukuko
ukungcola, ngelixa uqinisekisa ukuhamba okwaneleyo.
■ Xa ubushushu bangaphandle buyehla buye kwixabiso elithile okanye xa isihluzi seoyile sidlula kubomi benkonzo yesiqhelo, ivelufa yokuphuphuma iya kuvulwa phantsi koxinzelelo olukhethekileyo, ivumela ioyile engacocwanga ukuba iwele ngqo kwiinjini. Ngaphandle koku, ukungcola kwioyile kuya kungena kunye, kodwa umonakalo mncinci kakhulu kunomonakalo obangelwe yi-oyile kwi-injini.
The Ivalvu ephuphumayo sisitshixo sokukhusela i-injini kwimeko engxamisekileyo
Ivelufa yokucinezela ebuyela umva
■ Iyafumaneka kuphela kwizicoci zeoyile ezikumgangatho ophezulu.
Ithintela isihluzo seoyile ukuba singomi xa injini icimile
■ Xa injini iphinda yasebenza kwakhona, ngokukhawuleza yenza uxinzelelo kwaye inike ioyile ukuthambisa i-injini. (Ekwabizwa ngokuba yi-check back valve)
1. IPhepha elisebenzayo
ikhusela iinjini ngokuchasene nezinto ezingcolisayo.
2. I-Silicon Anti-Drainback
kuthintela ukuqala okurhabaxa okubangelwa kukukhupha i-injini kwi-injini ngelixa isithuthi sicinyiwe.
3. I-O-Ring yangaphambi kokuthambisa
Ukutywina okungcono kuneegaskethi ezisetyenziswe lolunye uphawu.
Egqithileyo Isixhobo sokucoca ulwelo seCarbon HEPA sokucoca ulwelo somoya
Okulandelayo: Icandelo elizenzekelayo lokucoca ulwelo lomoya kweToyota OEM 17801-0M020
Icebo lokucoca ulwelo oluzenzekelayo
Isixhobo sokucoca ioyile
Icebo lokucoca ioyile
Icebo lokucoca ulwelo lweToyota
Iifilitha zeoyile eTshayina